I-Fluxreader: Enye indlela yami ecacile ye-Google Reader | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nokusesha kwami ​​okungagculisi ukufaka esikhundleni -Google Reader, Ngifikile I-FluxReader, futhi kuze kube manje kulokho engikuzamile, iba yindawo efanelekayo.
I-FluxReader ine-interface encane, futhi isebenzisa i- sokuqalisa ikwazi ukuthola ukubukeka okufana kakhulu nalokho kwe- -Google Reader, kakade kuleyo mininingwane kutholwe +1. Elinye iphuzu lokuhlanganisa: kuyashesha kakhulu.
Okwamanje unezinketho eziyisisekelo kuphela zesifundi se-RSS. Kusivumela ukungenisa okubhaliselwe kwethu kusuka ku- -Google Reader, kodwa hhayi ngqo, okokuqala kufanele silande ifayela le- .xml.
Kufanele bangivumele ngilayishe konke okubhaliselwe, kuthatha isikhathi saso ngokuya ngokuxhumeka kwethu. Isikhathi sokuqala lapho ngangenisa khona angizange ngikuyeke kuqede futhi ayizange ilayishe amafolda nokuqukethwe kwawo kahle.
Kepha akuyona yonke into ephelele. Kungumkhiqizo osanda kuzalwa futhi-ke ezinye izinto zilahlekile. Kuze kube manje angazi noma ngabe izibuyekeza ngokuzenzakalela noma uma kufanele uchofoze ifayela le- Ukubuyekeza.
Enye imininingwane ukuthi angitholanga indlela yokuphatha i-RSS yami, ngakho-ke angikwazanga ukususa noma iyiphi. Sawubona! Kodwa yini ababelindele? Kusenendlela ende okufanele ikhule ukuze ikhule, noma kunjalo, kimi kuyindlela engcono kakhulu ekhona njengamanje -Google Reader.
Manje kwangathi othile angangibuza ukuthi yini Ukudla? Kulungile Ukudla kubi kakhulu. Iphethwe ku-code.google.com futhi zona kanye izingane zikanina azivunyelwe ukuthi izwe lami lifinyelele kwizinsizakusebenza zalo, ngakho-ke, ayingisebenzisi. Kubuye kuhamba kancane ngokunambitheka kwami.
Uma befuna ukusebenzisa I-FluxReaderYebo, kufanele bathumele isicelo sokuyihlola, njengoba kunjalo naku-beta. Ukugunyazwa kwami ​​kubambezeleke izinsuku ezimbili.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Fluxreader: Enye indlela yami ecacile ye-Google Reader
Yebo, ngizozama ... .. Kubonakala kuthakazelisa, ngaphandle kwalokho ngiyazithanda izinhlelo zokusebenza ezincane.
Angiwuqondi umusa womfundi we-rss ngaphakathi kwesiphequluli. Ngihlala neLiferea.
Noma kunjalo, ngiyabonga ngesincomo.
Ilula kakhulu .. nge-RSS Reader efwini noma ngabe ngikuphi nge-Intanethi ngikwazi ukufunda izindaba zami. Hhayi ngeklayenti le-PC.
Uma usebenzisa amadivayisi amaningi, i-Liferea ayivumelanisi futhi awazi ukuthi yiziphi izindaba ozifundile. Uhlelo lokusebenza lewebhu lunikeza leyo nzuzo ngokwakhona.
@elav @Urizev +1 kubo bobabili. Lokho kuyinzuzo enkulu yefu, ukuba nezinsizakalo kunoma iyiphi idivayisi.
Endabeni yeGoogle Reader, ngivame ukufunda ama-feed kwi-laptop, kodwa uma ngingenawo ngingawafunda kumakhalekhukhwini wami, noma uma nginesikhathi samahhala ehhovisi, ngithatha i-PC futhi wafunde lapho. Ikhululekile impela.
Okokuqala ... unazo izinqamuleli zekhibhodi (ikakhulukazi, uJ ukwehla no-K ukukhuphuka)?
Uma unakho lokho, sekuphelile 😀
Angicabangi kanjalo .. Kuyinto esanda kwenzeka okwamanje, le misebenzi izofakwa kancane kancane ngicabanga ukuthi .. yilokho i-beta eyenzelwe ukuthumela ama-Feedbacks 😀
Kungenzeka yini ukuthi wabelane ngokuthi kungenziwa kanjani ku-GReader ngaphambi kokubeka +1? Kwakungenye yezinto engizithandayo.
Ngabe uke wazama iThe Old Reader (http://theoldreader.com/)?
Kufanele ngiyivivinye kahle, kepha ngigcine ukuyenza ayizange idonse iso lami.
Sawubona! Sawubona! Bengingazi ukuthi i-Google ivimbela amazwe ukufinyelela i-code.google.com. Futhi kungaphansi kwamiphi imingcele iGoogle enquma ukuthi yiliphi izwe elingafinyelela noma elingakwazi ukufinyelela amasevisi alo?
Athini amaphuzu wokukwenza?
Ngokwethembeka ihlazo langempela.
Awuzange uzame ukufinyelela kommeleli?
Ngicabanga ukuthi ukuvinjelwa i-USA ngokumelene namanye amazwe ...
Akukubi, yize ngithanda ukufaka isicelo. Ngidubula kusuka ku-akregator.
e Xe kusho
Ngibe naye izinsuku ezimbili, ngiyethemba usendleleni efanele, useluhlaza kakhulu. Sizomlandela ngomkhondo.
Phendula uzwane Xe
Ukunambitha imibala ...
Kubi kakhulu ukuthi laphaya eCuba bavimbela ukufinyelela ezinsizakalweni zeGoogle .. Ngokuvamile, iFeedly iyona ekahle, ngemuva kokuvalwa kweGoogle Reader ithathe inani elilingayo labasebenzisi engicabanga ukuthi ngisho nokuvulwa kweMega hehe xD!
Angikaqondi ukuthi kungani kunqunyelwe…. Kubukeka njengezinto ezisuka empini ebandayo….
Othile uyangilungisa uma nginephutha, i-rss inomkhawulo maqondana nokufakiwe okugcinayo, ngicabanga ukuthi bangama-20 okugcina, ngakho-ke ngesikhathi ngivula umshini bese ngivula i-liferea kungenzeka ukuthi okubhaliselwe okune-20 entsha okufakiwe kungenzeka kushoda nganoma yikuphi. Futhi ngendlela engiyincomayohttp://theoldreader.com/) ilula kakhulu, ivuselelwa kuphela futhi kulabo abasetshenziselwa ukwaba abakufundayo kuyahambisana ne-facebook.
Futhi unenketho yokwabelana iGoogle Reader eyayinayo ngaphambi kokushintshela ku- +1?
Inenketho yokwabelana futhi ngiyayithanda… kimi ngibhalise nge-gmail hhayi nge-facebook kepha ngiyabala ukuthi kuyefana. Angikusebenzisanga ukwabelana kepha ngokwalokho ebengikuqonda uma ubhalise ne-facebook ngokwesibonelo iyasesha phakathi koxhumana nabo futhi ikutshele ukuthi ngubani obhaliswe kumfundi wakudala. Ukusuka lapho, kukuvumela ukuthi uqhubeke phakathi kwalabo aba ...
Ngokufushane njengesandiso seFirefox sisebenza kahle kakhulu, ngokushesha, sizibuyekeza ngokuzenzakalela. https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/brief/?src=search
umfundi wakudala akayena isilima ukuba abe ngabambalwa abakhethiwe.